Soosaarayaasha Mashiinka Kala-baxa - Shiinaha Shibilida Mashiinnada Mashiinnada & Warshadaha
Mashiinka xawaaraha sare ee 2m-6m
Mashiinka xawaareynta xawaare sare wuxuu ka kooban yahay farsamaynta miinada, habka goynta, habka dabaysha, shaqo kasto iyo xakameynta xiisadda hagaajinta xakamaynta iyo aaladda ogaanshaha. Mabda'a shaqada ayaa ah sida soo socota: filimka metalli-ka ah ee alaabta ceyriinka ah ee laga sii daayay mashiinka miyir-qabka ah wuxuu gelayaa habka goynta iyadoo loo marayo furfurka jilicsan, rogaha ogaanshaha xiisadda, awood u siinta roller iyo nidaamka sixitaanka qallooca. Ka dib marka alaabada ceyriinka la gooyo, habka dib-u-warshadeynta ayaa dib ugu laabanaya ...
Mashiinka sifeynta xawaaraha sare Si loo haqabtiro baahiyaha suuqa, waxaan horumarinnay istiraatijiyad ballaaran oo sidan oo kale ah. Mashiinka xawaaraha sare leh wuxuu gooyn karaa 2 mitir ilaa 6 mitir qalabka baakadaha ballaaran, sida BOPP / CPP / OPP / PET / PE / PVC iyo wixii la mid ah. Astaamaha Mashiinka La qabatimay Siemens servo motor iyo koontaroolka dhaqdhaqaaqa Siemens si ay u bixiyaan xakamaynta xasilloonida xasiloonida qaabdhismeysan, nidaamka ku habboon ee qalliinka internetka, waxaana lagu xiriirin karaa internetka Waxyaabaha waxyaabaha fogfog looga dhigo iyadoo lagu saleynayo kantaroolka ugu weyn ...
Mashiinka goynta Pipe
Mashiinka sifeynta xawaaraha sare Si loo haqabtiro baahiyaha suuqa, waxaan horumarinnay istiraatijiyad ballaaran oo sidan oo kale ah. Mashiinka xawaaraha sare leh wuxuu gooyn karaa 2 mitir ilaa 6 mitir qalabka baakadaha ballaaran, sida BOPP / CPP / OPP / PET / PE / PVC iyo wixii la mid ah. Astaamaha Mashiinka: Qaado Siemens servo motor iyo koontaroolka dhaqdhaqaaqa Siemens si ay u bixiyaan xakamaynta xasilloonida xasilloonida qaabdhismeedka, nidaamka ku habboon ee qalliinka internetka, waxaana lagu xiriirin karaa internetka Waxyaabaha loogu talagalay xakameynta fog ee ku saleysan xakamaynta ugu weyn ...